कसरी मिति एक केटी संग एक बच्चा
जब एक जवान स्त्रीको छ, एक क्याफे मा बसिरहेका संग एक कप कफी, नृत्य मा एक क्लब वा साथीहरूको बीचमा, केही छुट्याउँछ देखि उनको अपुताली प्रतियोगिहरु । तपाईं हुनेछ थाहा छैन कि छ. तपाईं सुरु गर्न जाँदै हुनुहुन्छ एक केटी डेटिङ संग एक बच्चा छ । त्यो निर्णय बस गर्न अनुमति आफु आराम गर्न घन्टा को एक जोडी छ । तर, यो चित्र को मुक्त स्त्रीको त्यो हाल छ, छली छ । यदि त्यो उल्लेख उनको बच्चाहरु मा कुराकानी, एक मानिस छ जो चासो देखाएका उनको मा परिवर्तन, को सामने: उहाँले भ्रमित हुन्छ वा । तिनीहरूलाई केही, तिनीहरूले, भन्न तुरुन्तै दूर चलान गर्दा, अरूलाई जारी गर्न इश्कबाज तर तोड्ने जडान रूपमा चाँडै रूपमा प्रकाश कामकाज सुरु गर्न बारी मा एक गम्भीर सम्बन्ध छ । के छ भनेर. यो एक पूर्वाग्रह? यो एक डर को जिम्मेवारी? या शायद यस कारण लागि, यो विभाजन मा छ उनको उच्च आशा । अक्सर, एक मानिस पात संग एक महिला एक बच्चा छ किनभने उहाँले डर, र उहाँले सक्दैन वा गर्दैन चाहनुहुन्छ कि स्वीकार गर्न पनि आफूलाई । यो हुन्छ, एक रूपमा शासन, आफ्नै छोराछोरीलाई: तिनीहरूले छन् डर को जिम्मेवारी बारे जो तिनीहरूले थाहा छैन, केहि मा सबै. तिनीहरूले छन् कि डर तिनीहरूले हुनेछ को आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता किनभने बच्चा र तिनीहरूले हुनेछ भन्ने सक्षम छैन संग सम्पर्क स्थापित गर्न एक सानो व्यक्ति । एक मानिस द्वारा अलमल्ल प्रश्न, साथी डेटिङ संग एक महिला एक बच्चा, के भूमिका गर्न खटाइएको छ भने मलाई हाम्रो सम्बन्ध जारी छ । यस्तो डर, शंका र प्रश्न उठ्ने छैन, बिना कारण । तपाईं मिति संग एक महिला एक बच्चा छ? वास्तवमा, एक संभावित साथी छ एक कठिन समय किनभने, उहाँले अनुहार मा एक बलियो सम्बन्ध बीच एक आमा र एक बच्चा छ । उहाँले पर्छ, बिना नकारात्मक प्रभावित यस संघ, कायम व्यक्तिगत सम्बन्ध संग महिला र, एकै समयमा, हासिल गर्न प्रयास को पक्षमा, उनको बच्चाको मा अन्य शब्दहरू, निर्माण ठीक आफ्नो सम्बन्धबारे दुवै छ । चासो मा एक महिला एक बच्चा हुर्काउन अलग राख्दछ विषयहरूमा को एक नम्बर बिना हल जो यो निर्माण गर्न कठिन छ कुनै पनि सम्बन्ध छ । के गर्नुपर्छ मान्छे के भने उहाँले साँच्चै रुचि छैन बस एक केटी तर एक केटी संग एक बच्चा छ । मिति एक केटी संग एक बच्चा छ? आफ्नो हृदय द्वारा एक सुन्दरता र त्यसपछि तपाईं बाहिर प्राप्त गर्न कि अर्को उनको त्यहाँ छ एक सानो बच्चा छ । तपाईंले के गर्नुपर्छ? सम्बन्ध सुरु जो एक केटी संग एक बच्चा छ, वा दिन को कठिनाइहरू, संग सम्बन्धित ढाँचा । सबै पछि, धेरै बालिका छन् छैनन् जो द्वारा बोझ यस्तो जिम्मेवारी छ । तपाईं लज्जित छैन, मात्र व्यक्तिगत गर्न जिम्मेवारी संग जोडिएको पहिले नै अवस्थित मिनी-परिवार, तर पनि भन्ने तथ्यलाई द्वारा आफ्नो अनपेक्षित उपस्थिति, सायद, मनमोहक छैन.
यसैबीच. छोराछोरीलाई जस्तै धेरै, विश्लेषण को र विपक्ष, एक केटी डेटिङ संग एक बच्चा छ । यस्ता मानिसहरू सधैं प्रेम आफ्नै छोराछोरी, तिनीहरूले सधैं स्वीकार गर्न सक्षम, र तिनीहरूलाई हुर्काउन, त्यसैले छोराछोरीलाई अपनाए आवश्यक छैन सबै. तर, एक जिम्मेवार मानिस हुनेछैन अलमल्ल यति धेरै तथ्य यो हो कि उहाँले रुचि एक केटी संग एक बच्चा तर संग व्यवहार गर्न कसरी संग उनको र उनको बच्चा छ । एकल आमाहरु छन् ब्राइड्स विशेष ज्ञान र मापदण्ड छ । मिति एक केटी संग एक बच्चा छ? अनुसार (तिनीहरूले प्रतिबिम्बित राय को एक निष्पक्ष दर्शक), अधिकांश एकल आमाहरु छन् भरेको एक विरोधाभासपूर्ण सेट को कौशल र आकांक्षाओं को एक ठूलो भाग हुन सक्छ जो सुरक्षित जोडी को सूचीमा. जब तपाईं हेर्न एउटा अचम्मको केटी, मिति एक केटी संग एक बच्चा वा बस एक सेक्सी महिला । खैर, तपाईं गर्नुपर्छ बनाउन प्रयास आकर्षित गर्न उनको ध्यान । एक महिला एक बच्चा संग छैन सिर्फ एक आमा तर पनि जो एक केटी बारेमा सपना शुद्ध प्रेम । पक्कै पनि, त्यो बताउन छैन, तपाईं सबै उनको राज धेरै सुरुदेखि र त्यो शायद तपाईं बताउन बारेमा उनको बच्चाहरु पहिलो, तपाईं जीत गर्नुपर्छ उनको हृदय. त्यो गर्न चाहन्छ भन्ने थाह तपाईं साँच्चै उनको रुचि र तपाईं एकदम विश्वसनीय र गम्भीर पूरा गर्न उनको बच्चा छ । तपाईं यसको बारे सोच्न भने कसैले डेटिङ एक बच्चा संग, तपाईं गर्न तयार हुनुपर्छ साझा जिम्मेवारी हो । कसरी मिति एक महिला संग एक बच्चा छ । सबै को पहिलो, तपाईं गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न आफ्नो महिला ले ठूलो काम हुर्काउन उनको बच्चा आफु. तपाईं लाग्छ सक्छ कि त्यो आत्म-पर्याप्त र कुनै न कुनै, तर तपाईं पढ्न सकिँदैन उनको विचार र को विशाल संख्या विभिन्न चुनौतीहरू, त्यो अनुहार हरेक दिन । त्यो आवश्यकता समर्थन र समय आफु लागि. यदि तपाईं मिति संग एक केटी एक बच्चा र तपाईं उनको प्रेम, रोगी हुन र तपाईं देख्न हुनेछ एक निश्चित केटी पछि एक मास्क को फलाम लेडी. कसरी मिति एक केटी संग एक बच्चा छ । रूपमा कुनै पनि अन्य महिला, एक एकल आमा चलान गर्न चाहनुहुन्छ दूर उनको देखि दैनिक जीवन र बन्न बस हो जो एक सुन्दर महिला जस्तै व्यवहार, एक राजकुमारी छ । त्यो उतरदायित्व लिनु गर्न प्रयास नजर सुन्दर र मनमोहक छ, तर, त्यो रद्द गर्न सक्छन् पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मिति हो । कहिलेकाहीं जीवन छ छैन पूर्वानुमान, विशेष गरी भने, तपाईं छोराछोरीलाई छ गर्न सक्छन् जो बिरामी पर्नु वा समस्या मा प्राप्त. डेटिङ सुरु कसैले संग एक बच्चा लिन, सबै कुरा सजिलो र समझ छ । तपाईं सधैं सम्झना भनेर आफ्नो महिला पर्खेको गरेर उनको बच्चा घर मा छ, त्यसैले, सामान्यतया, त्यो खर्च गर्न सक्दैन कुनै अनपेक्षित निर्णय छ । तपाईं रुचि हो भने एक एकल संग बच्चा डेटिङ, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ कि त्यो सधैं खोज्छ सबै कुरा राख्न अन्तर्गत देखिने वा नदेखिने नियन्त्रण । जस्तै, त्यो फिर्ता आउन पर्छ घर द्वारा सेट समय र कुनै पनि बहाना स्वीकार्य छन् । सबै छोराछोरीलाई आवश्यक आमापट्टिको ध्यान, तपाईं बस गर्नुपर्छ भनेर सम्झना कथन छ । सम्झना कि भावुक र चुंबन छोराछोरीलाई अगाडि छन् सबै भन्दा राम्रो विचार छैन. छोराछोरीलाई धेरै कुनै पनि उमेर मा, त्यसैले यदि तिनीहरूले संलग्न हुन र तपाईं आफ्नो सम्बन्ध संग आफ्नो आमा, तिनीहरूले महसुस गर्न सक्छन्, तनाव र आहत छ । हरेक असल आमा ठान्नुहुन्छ, उनको बच्चा हुन मुख्य र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता मा उनको जीवन, तपाईं बस गर्न आवश्यक यस तथ्यलाई स्वीकार संग प्रतिस्पर्धा गर्न एक बच्चा, देखिन्छ अजीब छ । एक बुरा कुराहरू तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ छ उनको सल्लाह दिन वा सिकाउन कसरी उनको हुर्काउन गर्न उनको छोराछोरी, विशेष गरी. तपाईं हुनुपर्छ या त एक बाल विशेषज्ञ वा एक प्रसिद्ध बाल सदन शिक्षक उनको बताउन को लाभ बारे केही अभिनव तरिका को छोराछोरीलाई शिक्षित गर्न । तपाईं चाहनुहुन्छ भने माथि ल्याउन उनको छोराछोरी, तपाईं बन्न गर्नुपर्छ, एक विश्वसनीय भाग उनको परिवार । तपाईं कसरी प्रतिबिम्बित गर्न मिति एक केटी संग एक बच्चा, तयार छ कि छ. कहिलेकाहीं तपाईं जान हुनेछ संग एक मिति मा दुवै किनभने त्यो छ छैन कसैले तिनीहरूलाई छोड्न । जस्तै कुनै पनि अन्य महिला छ, त्यो खर्च गर्न रुचि थियो कि मिति मा एक विशेष तरिका, तर, त्यो सधैं खातामा लिन उनको छोराछोरीलाई । बस भनेर स्वीकार र राख्न अप्रिय भावना त्यस अवसरमा आफैलाई गर्न. जस्तै कि विचार मा सबै, उनको र बस रूपमा भन्ने स्वीकार कुनै पनि अन्य छ । केही मानिसहरू तोड संग मात्र एक पत्नी संग तर पनि छोराछोरीलाई बस छोडेर, परिवार र बच्चाहरु थाहा छैन आफ्नो बुबा छ कि पक्कै पनि राम्रो को लागि एक नयाँ मानिस.
तैपनि, धेरै मानिसहरू कुराकानी गर्न जारी संग, आफ्नो बच्चाहरु र आफ्नो पूर्व-पत्नीको रूपमा राम्रो तरिकाले
तपाईंलाई सम्झना गर्नुपर्छ कि तिनीहरूले के भनेर मात्र छोराछोरीलाई लागि र आफ्नो लाभ, डाह छ । हरेक एकल आमा विभिन्न खेल खेल्न र; टी हेर्न चाहनुहुन्छ रहस्यमय छ । तिनीहरूले, तिनीहरूले चाहनुहुन्छ के थाहा सुनिश्चित गर्न को लागि र यदि आफ्नो इच्छा खेलमा, तपाईं फारम हुनेछ एक सुन्दर र बलियो.
तपाईं प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ, केवल निष्कपट मनोवृत्ति तपाईं तिर साथै त्यो चाहनुहुन्छ इमानदारिता
धेरै एकल आमाहरु पहिले नै थियो अप्रिय अनुभव, विगतमा तिनीहरूले गरेका छन् निष्कर्ष र लागि तयार छन्, नयाँ सम्बन्ध छ । तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् एक अद्भुत इनाम हो भने तपाईं संग इमानदार उनको जे हुन्छ. एक केटी संग एक बच्चा हुनेछ आफ्नो वफादार साथी र सबै भन्दा राम्रो मित्र छ भने, तपाईं शो बुद्धि र धैर्य छ । तपाईं मित्र बनाउन सक्नुहुन्छ उनको बच्चा संग र भएको एक साँच्चै अनुकूल र खुसी परिवार भविष्यमा
← निःशुल्क अनलाइन भिडियो च्याट कोठा को लागि मान्छे संग कुरा दुनिया भर
कहाँ पूरा गर्न एक विदेशी मान्छे पोल्याण्ड मा बाहिर एक डिस्को क्लब →